ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားလူထုအကျိုးပြုအဖွဲ့အစည်းအတွက် ဥပဒေသင်တန်းပေးခြင်း | AndamanCEIA
Leaveareply	ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားလူထုအကျိုးပြုအဖွဲ့အစည်းအတွက် ဥပဒေသင်တန်းပေးခြင်း
2556 ခုနှစ်၊ 7-8 ရက်နေ့က ကရဘီခရိုင်တွင် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက် ဥပဒေသင်တန်းတစ်ရပ်ပြုလုပ်ခဲ့ရာ၊ အဆိုပါသင်တန်းမှ ထိုင်းနိုင်ငံဥပဒေအကြောင်းအရာများကို သင်တန်းတက်ရောက်သူများနားလည်စေပြီး၊ မိမိအတွက်နှင့် အများအတွက်လည်းအကျိုးပြုနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ သင်တန်းဆရာမှ သင်တန်းသူ၊သားများနားလည်စေရန် ဥပဒေနှင့် ပတ် သက်သောအကြောင်းအရာတို့ကို လူ့အခွင့်အရေးများကိုဥပမာပေး၍4ပိုင်းခွဲချပြခဲ့ပါသည်။
တန်းတူညီမျှမှုရှိသော ပညာရေး၊ လူမျိုးတိုင်းရဲ့ကလေးများ ပညာသင်ကြားခွင့်ရှိ
အရေးကြီးသောအခွင့်အရေး ၄ ချက်မှာ ပညာရေး၊ နေထိုင်ရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အစားသောက်
လူမှုအသိုင်းဝိုင်းမှ အရိုသေ၊ အလေးစားမှုခံယူခွင့်
လေ့လာချက်။ ။ ဥပမာအဆင့်အတန်းအရကြည့်ပါက သမ္မတ၊ ၀န်ကြီးချုပ်၊ တရားသူကြီး၊ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား၊ နိုင်ငံခြားသား၊ လယ်သမား၊ တိုင်းတပါးမှဝင်လာ၍အခြေစိုက်နေထိုင်သူ၊ ရဟန်းသံဃာ၊ ရောဂါသည်၊ ကလေးတို့သည် မည် သို့ကွာခြားကြပါသနည်း။
– ဓါတ်ကြီး ၄ ပါးလိုအပ်တာချင်းလည်းတူ
– လူတိုင်းမှာ အရည်အချင်း ၆ ပါးရှိတယ်၊ မြင်နိုင်ခြင်း၊ အသက်ရှူခြင်း၊ နားထောင်နိုင်ခြင်း၊ စားသောက်ခြင်း။
သင်တန်းသူ/သားများသည် အထက်ပါလူ့အခွင့်အရေးအကြောင်းအရာများအား ကောင်းစွာနားလည်ခဲ့ကြပါသည်။ ဥပဒေ ပိုင်းဆိုင်ရာခေါင်းစဉ်များအား သင်ခန်းစာများအဖြစ်လေ့လာစေခဲ့ပါသည်။
နိုင်မိုးသည် ထိုင်းနိုင်ငံသို့တရားမ၀င်နည်းဖြင့် ကော့သောင်းမှရနောင်းမြို့ကိုဖြတ်ကာ ကရဘီခရိုင်အတွင်းရှိ ဖယ်တခုမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်ပါသည်။ နိုင်မိုးသည်အလုပ်အားခ တရက်လျှင် ဘတ် ၂၀၀ရရှိပြီး နံနက် ၇ နာရီမှ ည ၇ နာရီအထိအလုပ် လုပ်ရသည်။ အလုပ်ရှင်က နိုင်မိုးအား နေစရာအခန်းစီစဉ်ပေးသည်။ လတိုင်း၏ ၅ ရက်နေ့တိုင်းတွင် အလုပ်ရှင်မှလစာ ထုတ်ပေးသည်။ နိုင်မိုး ၁ နှစ်ခန့်အလုပ်လုပ်ရာ ကျန်းမာရေးမကောင်းသဖြင့် ၂ ရက်တာအလုပ်နားလိုက်သည်။ အလုပ် ရှင်မှ နိုင်မိုးအားအလုပ်ထုတ်ပစ်၍ နိုင်မိုးအလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်မရှိသောကြောင့် ရဲဖမ်းခိုင်းသည်။ ဤသင်ခန်းစာသည် နိုင်မိုးအား မည်သည့်ဥပဒေအောက်တွင် အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံသနည်း။ နိုင်မိုးသည် မည်သည့်အခွင့်အရေးများရှိပါ သနည်း၊ မည်သည့်ဌာနများအား မည်ကဲ့သို့ဆောင်ရွက်ရမည်နည်း။
မခင်သည် အလုပ်ရှင်မှ ကရဘီအလုပ်သမားရှာဖွေရေးရုံ၌မှတ်ပုံတင်ပေးထားသော အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်အားကိုင် ဆောင်၍ အုန်းသီးခြစ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင် အလုပ်လုပ်နေပါသည်။ အုန်းသီးခြစ်ခ တစ်လုံးလျှင် ၁ ဘတ်ရရှိသည်။ မခင်သည် ခင်ပွန်းသည်အပါအ၀င် အခြားအလုပ်သမားများနှင့်အတူနေထိုင်ကြသည်။ ၁ ရက်နေ့၊ ဧပြီလ၊ ၂၅၅၆ ခုနှစ်တွင် အုန်းသီး ခြစ်နေစဉ် ရုတ်တရက်အုန်းသီးခြစ်စက်ချို့ယွင်းကာ စက်ရပ်သွားသဖြင့် မိမိလက်နှင့်စမ်းသပ်စစ်ဆေးကြည့်နေချိန်တွင် စက် ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသဖြင့် မခင်လက်စက်ထဲဝင်ညှပ်နေသည်။ ထို့ကြောင့် မခင်သည် ဆေးရုံ၌ ၁ လခန့်ဆေးကုသမှုခံ ယူပြီး မခင်လက်ကောက်ဝတ်ထိဖြတ်လိုက်ရသဖြင့် ၆ လခန့်အလုပ်မလုပ်နိုင်လေသည်။ အနာသက်သာသောအခါ အလုပ် ရှင်မှ ဆေးကုသစရိတ်ရှင်းမပေးသည့်ပြင် ဖြစ်ပျက်သမျှကိုလည်းအားမမခံပဲ မခင်အားအလုပ်မှထုတ်ပစ်လိုက်လေသည်။ ဤသင်ခန်းစာသည် မခင်အား မည်သည့်ဥပဒေအောက်တွင် အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံသနည်း။ မခင်သည် မည်သည့် အခွင့်အရေးများရှိပါသနည်း၊ မည်သည့်ဌာနများအား မည်ကဲ့သို့ဆောင်ရွက်ရမည်နည်း။
မမေသည် နိုင်ငံသားစီစစ်မှုပြုလုပ်ပြီးသော တရားဝင်လုပ်သမတဦးဖြစ်သည်။ သူမသည် ကရဘီခရိုင်တွင်ရှိသောသူငယ် ချင်းများထံအလည်ပတ်သွားသည်။ ကရဘီကားဂိတ်တွင် အ၀တ်ထုတ်တွေယူရန်ထိုင်စောင့်နေချိန်တွင် ထိုင်းအမျိုးသား ၂ ဦးသည် ရဲဖြစ်ကြောင်းပြောကာ မမေအားစစ်ဆေးမေးမြန်းကြသည်။ မမေသည် မိမိပါ့စပို့ပြလိုက်သည်။ ထိုအခါ ၎င်းအမျိုး သား ၂ ဦးသည် မမေအားအိမ်သာခန်းထဲခေါ်သွား၍ အ၀တ်စားချွတ်ခိုင်းပြီး ရှာဖွေကြလေသည်။ မတွေ့သောကြောင့် မမေ အ၀တ်အိတ်ထဲရှာဖွေကြသောအခါ အထုတ် ၂ ထုတ်တွေ့သည်။ အထုတ်အားဖြေကြည့်သောအခါ မြင်းဆေးများဖြစ်နေ သည်။ ထိုအခါ ထိုင်းအမျိုးသား ၂ ဦးသည် မမေအားကရဘီရဲစခန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကာ မမေ၏ပိုက်ဆံနှင့် ရွှေ ၁ ကျပ် ကိုပါ သိမ်းဆည်းလိုက်လေသည်။ မမေ၌အပြစ်ရှိပါသလား၊ မမေ၌မည်သည့်အခွင့်အရေးရှိပါသနည်း။ မည်သည့်ဥပဒေ နှင့် အခွင့်အရေးရယူပိုင်ခွင့်ရှိသနည်း။
သင်ခန်းစာ ၄ မောင်အေးသည် နိုင်ငံသားစီစစ်မှုပြုလုပ်ပြီးသော တရားဝင်လုပ်သမတဦးဖြစ်သည်။ ကရဘီခရိုင်တွင် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ကိုင်ကာ ၎င်းနှင့်အတူဇနီးသည် မအေးခိုင် နှင့် ၃ နှစ်အရွယ်သားလေးတစ်ယောက်ပါအတူနေထိုင်ကြသည်။ ၃၀ ရက် နေ့၊ ဧပြီလ၊ ၂၅၅၆ ခုနှစ် ၁၀း၀၀ နာရီခန့်တွင် အလုပ်ရှင်သည်အခြားနေရာတခုတွင်အလုပ်လုပ်ရန် ကားဖြင့်ပြောင်းရွှေ့သွား စဉ် ထိုင်းလူမျိုး နိုင်ချိုင်၏ကားမှဝင်တိုက်မိလေသည်။ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်သည့်ပြင် မောင်အေးသည် လည်ပင်ကြောလွဲ သွားသဖြင့် ဆေးရုံတွင် ၁၀ ရက်ခန့်နေပြီး ဆုံးသွားပါသည်။ မောင်အေးသည် မည်သည့်ဥပဒေအောက်မှ အခွင့်အေရးချိုး ဖောက်ခံရသနည်း။ မည်သူမှ မည်သူ့အားလျော်ကြေးတောင်ဆိုရပါမည်နည်း။
သင်ခန်းစာ ၁ အဖြေ။ ။ အလုပ်ချိန်အတွင်းမှရရှိသောဒဏ်ရာဖြစ်ကြောင်း၊ လျော်ကြေးနှင့်အာမခံရရှိနိုင်သည်မှာ လူမှုဖူလုံရေးဌာနဖြစ်ကြောင်း (ဆေးကုသစရိတ်၊ အချိန်ကုန်ဆုံးမှုအစား၊ ခန္ဓာကိုယ်ပြန်လည်ပြုစုရန်ကုန်ကျစရိတ်တို့ပါဝင်)
သင်ခန်းစာ ၂ အဖြေ။ ။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သောအဆင့်တွေကိုနားလည်စေရန်၊ ရာဇ၀တ်မှု ၅ မျိုးဖြစ်သော သေဒဏ်၊ ထောင်ဒဏ်၊ အကျဉ်းချဒဏ်၊ ဒဏ်ငွေဆောင်၊ ပိုင်ဆိုင်မှုသိမ်းပိုက်ခြင်းတွေဖြစ်ကြောင်း၊ အပြစ် ကျူးလွန်ခြင်းကိုနားလည်ရန်၊ ရဲသားများသည်လည်း ရဲအဆင်ယဉ်နှင့်ပြင်ပအဆင်ယဉ်ရှိသည့်အတွက်ကြောင့် ၎င်းတို့ထံမှ ကဒ်ပြားတောင်းကြည့်ခွင့်ရှိကြောင်း၊ အပြန်အလှန်ရိုးသားရမည်၊ အကယ်၍ဖမ်းဆီးရှာဖွေလိုပါက ရှာဖွေခွင့်ဝရမ်းစာရွက်ပါ ရမည် (အိမ်တွင်းရှာဖွေရန်အထူးဝရမ်းထုတ်ခံရခြင်း)။ နည်းစနစ်အရ အကယ်၍သံသယရှိသူမှာ မိန်းကလေးဖြစ်လျှင် စစ် ဆေးရှာဖွေသူလည်း ရဲမေဖြစ်ရမည်။ ရဲသားတို့လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိ။ ဆေးတွေ့ရှိသောအမှုမှာလည်း မမေအနေနှင့် စွပ်စွဲခံရ ကြောင်းငြင်းပိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် သက်သေခံခွင့်ရှိကြောင်း၊ ဖမ်းဆီးခံရကြောင်း ဆွေမျိုးသားချင်းများအားအသိပေးခွင့်၊ ရှေ့နေ နှင့်တွေ့ခွင့်၊ ၄၈ နာရီအတွင်း ထိန်းသိမ်းခွင့်၊ ချုပ်နှောင်ထားခွင့်၊ သက်သေအထောက်ထားစုဆောင်းရန်တောင်းဆိုခွင့်၊ အကယ်၍ ကျန်းမာရေး မကောင်းပါက ဆရာဝန်နှင့်တွေ့ခွင့်၊ အာမခံနှင့်ရွေးထုတ်ခွင့်(ကြီးလေးသောရာဇ၀တ်မှုမှလွဲ၍)။ အပြစ်ရှိကြောင်းတရားရုံးမှအမိန့်မချသေးသ၍ မမေမှာ အပြစ်မရှိပါ။
သင်ခန်းစာ ၃ အဖြေ။ ။ အလုပ်သမားဥပဒေသည် အလုပ်သမားများအားကာကွယ်ရန်ဖြစ်ကြောင်း နားလည်စေချင်၊ ဥပဒေနှင့်မကိုက်ညီသောအပြုအမူတို့သည် အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အလုပ်သမားဥပဒေအရ အလုပ်သမား အခွင့်အရေးတောင်းဆိုခွင့်ရှိသည်။
သင်ခန်းစား ၄ အဖြေ။ ။ လမ်းနှင့်ယာဉ်မောင်းစည်းကမ်းဥပဒေကို နားလည်စေချင်။ ကားသည် လူတိုင်းအတွက် အာမခံလုပ်ထားရမည်။ ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်လျှင် လျော်ကြေး၊ အနစ်နာကြေးတို့ကို ကားကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုရှိသည့် အတိုင်း တောင်းဆိုနိုင်သည်။ အာမခံရှိမရှိ နှင့် မည်သူ့ဘက်မှတာဝန်ယူရမည့်အကြောင်းကို ရဲဘက်မှဆုံးဖြတ်ပေးပေလိမ့် မည်။ အကယ်၍ အာမခံကုမ္ပဏီမှ လျော်ကြေးမပေးလျှင်။ ခေါ်ပေါ်ဖေါ်ဌာနသို့သွား၍ အာမခံကုမ္ပဏီလျော်ကြေးစေရန် တောင်းဆိုနိုင်သည်။
ရာဇ၀တ်မှု (သို့) တရားမမှု နှင့် ပြစ်ဒဏ်ပေးဥပဒေတို့ကို နားလည်စေရန်ဖြစ်သည်။ Share this:TwitterFacebookLike this:Like Loading...
This entry was posted in Uncategorized on August 18, 2013 by andamanceia.	Post navigation
← GLT (Grassroots Leadership Training) သင်တန်း
GLT (Grassroots Leadership Training) May 19-June 14, 2013 →
about.me	Recent Posts	GLT Training with arjarn Pracha Hutanuwat on critical thinking issue.